Home » Vaovao momba ny divay » Champagne ho an'ny olon-drehetra dia ny Stimulus COVID-nao
Champagne ho an'ny olon-drehetra dia ny Stimulus COVID-nao
Ny Mpanorina ny Herinandron'ny Champagne any New York ,, Blaine Ashley, dia nitafatafa tamin'i Dr. Elinor Garely, izay nifantohan'ny adihevitra ny antony mahatonga an'i Champagne tena ilain'izao tontolo izao ankehitriny.
Azontsika atao ve ny manokatra tavoahangy Champagne iray hamakivaky ilay lalana mikitoantoana, mikitoantoana, mikitoantoana, tsy mitovy làlana fantatra amin'ny hoe COVID-19?
Betsaka ny mpanjifa no mahita fa mahafinaritra mandritra ny taona eo amin'ny latabatry ny fianakaviana miaraka amin'ny sakafon'ny akoho nendasina sy ny french fries.
Ny faran'ny taona 2020 dia nahita Washington, DC, mpivarotra amidy champagne bebe kokoa taorian'ny fandresen'i Biden / Harris noho ny fankalazana ny fetin'ny Taom-baovao roa teo aloha.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, izao tontolo izao araka ny nahalalantsika azy, niaina azy, niainany ary matetika - no tiantsika aza… novaina. Ny fifandimbiasana dia tsy natolotry ny mpamorona lamaody manan-talenta, mpanakanto, mpitendry zavamaneno, mpahandro na mpanao maritrano. Ny fanovana dia nataon'ny filoha teo aloha, ny birao governemanta manerantany, ary ireo mpitantana orinasa izay, tsy nantenaina intsony, fa afaka tsy niraharaha ny siansa tamin'ny finoana fa RULE politika.
Toy ny andriamanitra autokratika sy demi, mpihetraketraka orinasa, ary mpitarika diso lalana hafa eo alohan'izy ireo, manome ny mason'ny fanantenana ny tantara. Na dia somary manjombona aza ny lasa sy ny ho avy vetivety dia hisy ny fahazavana… raha afaka miaina maharitra isika!
Ka ahoana no ahafahantsika mamakivaky ilay lalana mikitoantoana, mikitoantoana, mikitoantoana, tsy mitovy eo alohany? Manokatra tavoahangy Champagne izahay ary mijery ireo miboiboika miaraka amin'ny finoana fa ny hafa dia nahavita izany tamin'ny alàlan'ny ady sy areti-mandringana, tsy fitoviana ary fankahalana, ary izahay dia henjana sy mahazaka ka afaka mamaky azy amin'ny COVID-19.
Champagne no valiny
Talohan'ny taona 2020, nitombo ny fanjifana Champagne tamin'ny fanondranana any Etazonia nitombo 5 tapitrisa mahery ny tavoahangy teo anelanelan'ny 2015 sy 2019 (Comite Champagne) ary ny anjaran'ny tsenan'ny Champagne dia nitombo 3.51 isan-jato hatramin'ny 2016 (Drizly).
Mampalahelo fa ireo mpamboly voaloboka sy mpamokatra divay ao Champagne, France, miaraka amin'ny sisa amin'izao tontolo izao, dia voadona vokatr'io areti-mifindra io. Nanomboka ny volana aprily 2020, ny tsenan'i Champagne dia nilatsaka tamin'ny 1/3, mitovy amin'ny karama $ 2 miliara ary nitovy tamin'ny tavoahangy Champagne 100 tapitrisa - tavela amin'ny lisitra… tsy namidy.
Tsy vao sambany nitodika tany Champagne ireo mpanjifa. Tamin'ny 2009, nisy fihenan'ny 28 isan-jato ny fanondranana, ary nandritra ny Fahaketrahana Lehibe, efa ho zato taona lasa izay, dia tsy Champagne no zava-pisotro nisafidy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihenan'ny taona 2020 dia nampidi-doza tokoa nefa tsy nahagaga.
Fanamby atrehana amin'ny Champagne
Tompon'andraikitra ny marketing
Ny olana dia tsy noho ny vokatra fa noho ny fifantohany amin'ny marketing. Ny Champagne dia ampitahaina amin'ny vondron'olona faly, mankalaza ny fiandohan'ny fiainana (fahateraham-baovao), asa vaovao (na fampiroboroboana), fampakaram-bady na tsingerintaona, fandresena amin'ny loteria, na famitana marathon. Ireo hetsika mahazatra rehetra teo aloha ireo ankehitriny dia manome tontolo iainana tonga lafatra amin'ny fanaparitahana COVID-19 haingana sy tsy misy hatak'andro ary, noho izany, dia apetraka eo an-tampon'ny lisitra NO GO. Any atsimon'i California, manodidina ny 60 isan-jaton'ny varotra Champagne no mifandray amin'ny fankalazana. Rehefa tonga ny areti-mandringana dia nilatsaka 30 isan-jato ny varotra. Nandritra ny fanidiana eropeana, ny varotra champagne dia nihena sahabo ho 75 isan-jato.
Champagne no zava-pisotro mahamety indrindra ho an'ireo mpandeha mipetraka amin'ny seza kilasy voalohany sy orinasa any amin'ny seranam-piaramanidina. Ny COVID-19 dia nanafoana ny fisakafoanana mihaja sy marobe ary serivisy manokana ananan'ireo mpitatitra toa ny Singapore Airlines Ltd. sy ny Cathy Pacific Airways Ltd. Ny fifantohana amin'ny zotram-piaramanidina ankehitriny dia ny fiarovana sy ny fidiovana, manolotra fonosana tarehy sy mpanadio tanana fa tsy Champagne.
Taona fahatelo amin'ny fananahana izao tontolo izao
Ny faritra Champagne dia niaina fahavaratra mafana 3. Nanova ny toetrandro ny fiakaran'ny maripana ary namorona fandaharam-potoana sy fanamby vaovao ho an'ireo matihanina amin'ny indostrian'ny divay. Nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona dia nihoatra ny salanisa voarakitra ny mari-pana. Ny voninkazo voaloboka sy ny voaloboka dia nirehitra tamin'ny masoandro nandritra ny volana aogositra nanova ny fisiolojian'ny voaloboka. Ny voaloboka dia nisaina tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 (17 Aogositra) tao amin'ny faritra Aube.
Mety ho aloha loatra raha hamaritana raha taom-boaloboka ny 2020, fa ny manam-pahaizana kosa dia mamaritra fa misy ny fahitana matotra fa hahafinaritra izany satria misy fifandanjana tsara eo amin'ny fahamatorana sy ny asidra ary ny siramamy.
Fiheverana amin'ny areti-mandringana
Ny mpamboly sy ny mpamokatra divay Champagne dia zatra miatrika ny fiovan'ny toetr'andro, ny tany ary ny bibikely mikotroka amin'ny voaloboka, ravina ary voaloboka; na izany aza, ny viriosy manafika ny mpiasa sy ny mpanao divay dia fanamby mihoatra ny fahaizany. Ny krizy ara-pahasalamana dia nitaky fijerena vaovao ny vokatra, ny famokarana, ny fizarana ary ny fanjifana, mitaky ny fandaminana indray ny lozisialy mahazatra.
Fitsipika momba ny Komity Champagne
Izy io dia ny Komitin'ny Champagne, misolo tena ny vintner 16,000 ao amin'ny faritr'i Champagne ao Frantsa izay manome ny fitsipika ho an'ireo mpamokatra divay. Ny dingana voalohany dia ny fiarovana ireo mpiasa ary avy eo mampiofana avy eo manaraka ny fomba fidiovana. Ny dingana manaraka dia ny fametrahana fetra amin'ny habetsaky ny voaloboka azo jinjana miaraka amin'ny tanjon'ny fanohanana ny vidiny. Ny ampahany mampalahelo amin'ny tantara dia ny voaloboka be dia be no nopotehina na namidy tamina distilleries tamin'ny vidiny nihena. Nanapa-kevitra ny Komity fa avela hijinja voaloboka 8000 kilao isaky ny hektara ho an'ny vanim-potoana ny vintner, na ny tavoahangy 230 tapitrisa ho an'ny faritra iray manontolo izay ambany noho ny 21 isan-jato noho ny vola navela tamin'ny taona 2019.
Fanampiana avy amin'ny Governemanta France
Ny trano Champagne dia manana tahiry sy loharanom-bola hafa; na izany aza, tsy divay ny divay sy ny tany ary, noho izany, tsy afaka mandoa mpampindram-bola. Ireo mpamokatra divay Champagne dia afaka niditra tamin'ny pret garanti par l'Etat (PGE) findramam-bola zana-bola misy tombony ambany hatramin'ny 3 volana amin'ny turnover 2019 miaraka amin'ny fe-potoana mora aloa hatramin'ny 2022.
Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana dia nanomboka tsy nanefa ny trosany ny trosa raha toa ka nivadi-po ny varotra. Ny PGE dia nahafahana nandoa trosa ara-potoana, miaraka amin'ny karaman'ny mpiasa. Ny governemanta koa dia nandoa ny mpiasa izay nihena ny toerany tamin'ny alàlan'ny chomage partiel (ireo mpiasa tratry ny fahaverezan'ny karama dia omen'ny mpampiasa vola). Amin'ny alàlan'ny rafitra, ny mpiasa dia manohy mandray ny 85 isan-jaton'ny karamany na dia tsy miasa aza izy ireo. Ny fanampiana avy amin'ny governemanta hafa - fonds de solidarite - dia manampy ireo orinasa hijanona ambonin'ny rano. Amin'ny toe-javatra sasany, ny governemanta dia mamafa ny fiampangana ara-tsosialy sy / na hetra mandritra ny fotoana voafaritra rehefa nihena fatratra ny fifanakalozana. Ireo programa ireo dia nanakana ny olan'ny tsy fandriam-pahalemana ary mety hisorohana ny famonoana na fanamafisana bebe kokoa.
Ho ambany noho ny fahaizanao ny miditra fivarotana divay na mifampiresaka amin'ny mpandroso sakafo ary mangataka Champagne vera fotsiny! Toy ny vokatra mihaja hafa ihany, ny marika dia manan-danja toy ny vokatra ihany koa. Ireo mpitarika marika Champagne dia manomboka amin'i Moet, ary ny moet Hennessy dia eo an-tampon'ny lisitra Champagne ho fizarana iray amin'ny LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) izay manana marika Champagne 6 malaza toa an'i Veuve Clicquot, Moet & Chandon, ary Dom Perigon. Moet & Chandon no trano Champagne lehibe indrindra mivarotra tavoahangy 64.7 tapitrisa amin'ny taona 2019 miaraka amin'ny $ 42 eo ho eo isaky ny tavoahangy. Ny marika Moet Hennessy rehetra dia manome fidiram-bola isan-taona ho an'ny LVMH mitentina 2.21 miliara euro, izay mampiasa olona 2485.
Vranken-Pommery Monopole no vondrona Champagne faharoa lehibe indrindra ary manana marika Champagne dimy izy ao anatin'izany ny Vranken, Demoiselle, Charles Lafitte 183, Pommery, ary Heidsieck & Co. izay mamokatra vola 218.8 tapitrisa euro. Ny orinasa dia mitantana tany 2600 hektara (ny lehibe indrindra any Eropa) miparitaka amin'ny tanimboaloboka 4 any Champagne, Provence, Camargue, ary Douro.
Ny Trano Champagne an'i Nicolas Feuillate dia mitentina 211.9 tapitrisa euro amin'ny fidiram-bola arahin'i Lauren Perrier miaraka amin'ny 206.2 tapitrisa euro. Piper Heidsieck (Copagnie Champenoise PH-CS) dia manome fidiram-bola isan-taona 109.2 tapitrisa euro. Ny trano Champagne tranainy indrindra, Gosset, dia mamoaka vola 23.7 tapitrisa euro isan-taona (BoldData.com).
Raha ny filazan'i Michelle DeFeo, filohan'ny Laurent-Perrier US, ny ankamaroan'ny Champagne dia vidiana amin'ny fankalazana fialantsasatra; na izany aza, mpanjifa maro no mahita azy io mahafinaritra mandritra ny taona. Satria ny Champagne dia miraikitra tsara amin'ny sakafo dia nanomboka nipoitra teo amin'ny latabatry ny fianakaviana miaraka amin'ny sakafon'ny akoho nendasina sy ny mofo frantsay izany hoy i Philippe Andre, masoivohon'i Etazonia ho an'i Champagne Charles Heidsieck. Moet Imperial Brut dia mpiara-miasa akaiky amin'ny sushi.
Ny varotra Champagne dia nahita fiakarana ambony tany Etazonia tamin'ny faran'ny taona 2020 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Ireo mpivarotra antsinjarany any Washington, DC, dia nivarotra champagne bebe kokoa taorian'ny hetsika fa tsy ny fankalazana ny Taom-baovao roa lasa izay natambatra rehefa nankalaza ny fandresen'i Biden / Harris ny mpifidy. Na tany Brooklyn, NY aza, dia nisy Champagne nividy sakafo, ary nisy mpivarotra divay teo an-toerana namaritra fa nivarotra divay mamirapiratra 600 isan-jato mahery kokoa taorian'ny fifidianana noho ny herinandro teo ary lasa nivarotra ny lisitra nataony manontolo.
Ny tompona fivarotana divay dia manofana mpiasa indray mifototra amin'ny fikarohana ao Champagne fa ny antony lehibe indrindra amin'ny fivarotana Champagne amin'ny fividianana dia ny tolo-kevitry ny mpivarotra; noho izany, ny fiofanana momba ny mpiasa amin'ny varotra dia hifantoka amin'ny tolo-kevitra ho an'ny tavoahangy Champagne avo kokoa.
Champagne dia napetraka mba hamerina ny anjarany amin'ny tsena sy hivarotra tavoahangy 300 tapitrisa amin'ny faran'ny 2021 na 2022 farafaharatsiny.
Izay ilain'izao tontolo izao ankehitriny
Blaine Ashley, Mpanorina, Herinandron'ny Champagne any New York; Ny Fizz dia Vehivavy
kitiho raha te hihaino ny podcast
Nanomboka ny taona 2013, Blaine Ashley dia ampahany lehibe tamin'ny indostrian'ny Champagne ary tompon'andraikitra manokana amin'ny fanasongadinana ny vokatra amin'ny alàlan'ny hetsika mamorona sy avo lenta izay mampahafantatra ny varotra, ny haino aman-jery ary ny tsenan'ny mpanjifa amin'ity sehatry ny divay manan-danja ity. Tamin'ny taona 2018, natombok'i Ashley The Fizz ny vehivavy, andiana programa sy hetsika izay mankalazà vehivavy mitarika ny indostrian'ny divay mamirapiratra. Ny fahafantarana ny maha-zava-dehibe an'i Ashley amin'ny indostrian'ny divay mamirapiratra, ny magazine Enthusiast an'ny divay dia nanome azy ny anarana hoe The Champagne Queen ary nampiditra azy ho 40 ambanin'ny 40 Tastemaker (2016).
Teraka tao Honolulu, Hawaii, Ashley dia nanomboka ny asany amin'ny varotra tamin'ny lamaody niaraka tamin'ny Magazine Modern Luxury sy Haute Living. Tamin'ny 2010, nifindra tany New York izy ary nanomboka ny tsanganana isam-bolana, Sipped 'n Scene, navoaka tao amin'ny Tasting Panel and Destinations Travel.
Amin'ny 19 Febroary 2021, Ashley dia nitafatafa tamin'ny Dr. Elinor Garely, on WorldTourismNetwork izay nifantoka tamin'ny antony mahatonga an'i Champagne no tena ilain'izao tontolo izao ankehitriny.